Xildhibaan katirsan baarlamaanka Puntland oo ku dhaawacmay qarax gaari oo ka dhacay magaalada Gaalkacyo - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandXildhibaan katirsan baarlamaanka Puntland oo ku dhaawacmay qarax gaari oo ka dhacay magaalada Gaalkacyo
Xildhibaan katirsan baarlamaanka Puntland oo ku dhaawacmay qarax gaari oo ka dhacay magaalada Gaalkacyo. [Sawirka: Twitter]
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Xildhibaan katirsan baarlamaanka Puntland oo la dhaho Cabdiqaadir Faarax Bootaan ayaa ku dhaawacmay qarax gaari oo ka dhacay gudaha magaalada Gaalkacyo galabta oo Arabaco ah, sida ay sheegeen saraakiishu.
Xildhibaan Bootaan ayaa dhaawacmay kadib markii qarax loogu rakibay gaarigiisa uu ku qarxay isaga oo marayay aaga Xero-Daraawiish ee gudaha magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug.
Xildhibaanka dhaawacmay ayaa loo qadaaya isbitaalka guud ee magaalada Gaalkacyo, waxaana uu qaraxa ku waayay mid kamid ah lugihiisa, sida saraakiisha caafimaadku ay sheegeen.
Ma jirto cid wali sheegatay masuuliyada weerarkaas.
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa maanta oo Talaado ah ka dhoofay garoonka diyaaradaha kumeelgaarka ah ee Kanooko ee kuyaala duleedka caasimada Garoowe, isaga oo u safray dalka Isutaga Imaaraatka Carabta. Kahor inta [...]